Maxaa kaaga baxay dooda ka dhalatay duqeyntii Mareykanka ka fuliyay duleedka Gaalkacyo? | Jubbaland Media Online
Maxaa kaaga baxay dooda ka dhalatay duqeyntii Mareykanka ka fuliyay duleedka Gaalkacyo?
Sidaan la wada soconno 28kii bishan ciidamada cirka dalka Mareykanka waxay laayeen dabley soomaali ah, duleedka koonfureed ee magaalada Kaalkacyo ee gobolka Mudug. Mareykanka waxuu sheegay in uu iska caabiyay ciidamo ka tirsan Alshabaab oo doonayay inay weeraraan qaar ka mid ah ciidamadiisa gaarka ah ee ku sugan dhanka Puntland.
Maamulka Galmudug iyo dowladda fedraalka ayaa cambaareeyay weerarka, waxayna ku doodeen in ciidamada la dukheeyay ka tirsanaayeen kuwa maamulka Galmudug. Qaar ka mid ah golaha wasiirada dowladda Somalia ayaa soo saaray bayaan cambaareyn iyo baaq loo diray dowladda Mareykanka, iyaga oo gebi ahaan meesha ka saaray dooda Mareykanka. Maamulka Galmudug ayaa sidoo kale ku dooday in Puntland ku soo hogaamisay ciidamada Mareykanka.
Intaa ka dib Dowladda Mareykanka ayaa bixisay jawaabo is daba joog ah, waxayna gebi ahaan meesha ka saartay in ay laysay ciidamo dowladeed amaba kuwa maamulka Galmudug. Waxaa kaluu Mareykanka diiday eeda loo jeediyay Puntland, waxuuna sheegay in asaga uu masuul ka yahay wixii dhacay.
Ilaa iyo hadda Dowladda Mareeykanka waxay bixisay saddex jawaabood oo isku mid ah, waxana ugu dambeeyay hadalkii dhawaan ka soo yeeray safiirkeeda u fadhiyay dalka Soomaaliya oo sheegay in mowqifka dalkiisa uuna waxba iska bedelin, kaasoo ah inay dukheysay ciidamo ka tirsan xarakada Alshabaab.
Galmudug iyo Alshabaab maxaa iska galay? Waa su’aal dad badan isweydiinayaan! Ma aha markii ugu horeysay ee la maqlo muran la xiriira arinkan, amaba la kala garan waayo Galmudug iyo Xarakada Shabaabul-mujaahidiin. Hase ahaatee waa markii ugu horeysay ee uu murankan u tallaabo heer caalami.
Haduu murankan maanta taagan ahaan lahaa mid u dhexeeya amaba ku kooban soomaalida dhexdeeda, sida murankii ka dhashay dagaalkii weynaa ee dhanka xeebaha looga qaaday Puntland bishii March ee sanadkan, amaba murankii laga heshiiyay ee ka dhacay xuduuda DDSI la wadaagto Soomaalia, muranadaas iyo kuwa la midka ah waxaa lagu doodi karay waa fara isku fiiq-fiiqi macna-darrada ahaa ee soomaalida looga bartay, laakiin dhacdadan maanta waa mid ka duwan kuwaa hore, sababtoo ah Mareykanka waa dowlad weyn oo dagaal caalami ah kula jirto waxay u taqaano “argagixiso caalami ah” umana kala soocna deegaanada soomaalida iyo qabaa’illada soomaaliyeed.
Haduuna Alle nasri keenin, ama uuna waxba iska bedelin mowqifka dowladda Mareykanka, arinkan waxaa ka dhalan doona arimaha soo socda iyo qaar kaloo la mid ah:
Marka hore waa waji-gabax soo wajahay guud ahaan umadda soomaaliyeed, maadaama dowladdii dhee ee dalka ku lugleedahay arimahan, waxuuna sameyn ku yeelan doonaa guud ahaan dalka. si gaar ah dowladda dhexe iyo maamulka Galmudug.
Marka labaad arinkan waxuu xoojin-doonaa eedihii horay loogu jeediyay maamulka Galmudug, lana xiriiray is xulufeysiga Shabaab ee ka dhanka ah Puntland.
Marka saddexaad waxuu reebi doonaa cawaaqib xumo iyo kala aamin bax hor leh.
Waxaa qoray Bishar Haji.
Wixii talo iyo tusaalo ah kala xiriir; b.haji114@hotmail.com